ဒေါင်းလုပ်လုပ်လေယာဉ်ဆိုလိုသည်မှာပြင်ပအရေပြားဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ် Matin Marauder သာ inne ပြသ
မေးခွန်း ဒေါင်းလုပ်လုပ်လေယာဉ်ဆိုလိုသည်မှာပြင်ပအရေပြားဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ် Matin Marauder သာ inne ပြသ
2 နှစ်ပေါင်း3နာရီအကြာက #965 by robtho
ငါဆိုလိုသည်မှာမာတင် Marauder C47 ဘိုးအင်း Superfotress အချို့လေယာဉ်များကို download လုပ်သည့်အခါငါသာလေယာဉ်များ၏အတွင်းစိတ် workins ရ
1 months ago 11 တစ်နှစ် - 1 months ago 11 တစ်နှစ် #966 by DRCW
သငျသညျ DX9 သို့မဟုတ် DX10 preview ကို run နေပါသလား? သငျသညျအပြေးနေကြ FSX ရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်ဘောငျ? ဘောငျသငျနှငျ့အတူအပြေးသို့မဟုတ်အရှိန်မပါဘဲနေတယ်ဆိုရင်? သငျသညျပြတင်းပေါက်၏အဘယျဗားရှင်းရှိသနည်း
1 months ago 11 တစ်နှစ် #967 by robtho
ငါ့ဖြောင့်ဗားရှင်းနဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြတင်းပေါက် 11 အပေါ် DX7 ပြေးနေပါတယ် FSX။ ကိုယ့်အငြိမ်းစားပြီငါနည်းနည်းသံချေးတက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒါ inti ပျံသန်း afew နှစ်ကြာ Sims ပြန်ရတဲ့နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီ web site ကိုစိတ်ကူးရှာပြီးဒေါင်းလုပ်အများစု fine.Unfortunateley အလုပ်လုပ်ဟန်ကသင်အမှန်တကယ်ကြောင်းဘူးနဲ့တူသူများဖြစ်ပါသည်
1 months ago 11 တစ်နှစ် - 1 months ago 11 တစ်နှစ် #968 by DRCW
ထပ်မံနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်...FSX သင့်ရဲ့ရွေးချယ်စရာ Menu ထဲမှာ / ဘယ်အချိန်မှာ DX9 သို့မဟုတ် DX10 ကို Preview ဖြစ်စေအပေါ် run နိုင်ပါတယ် FSX ရုံ DX10 များလွှတ်ပေးရန်, ရှေ့တော်၌ကဖန်တီးပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့် DX9 များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများ menu ကိုသွားပါနှင့် DX10 preview ကို box ကို check လုပ်ထားသည်မဟုတ်သေချာပါစေ။ Rikooo လေယာဉ်တစ်စင်းလုံးကို default အနေဖြင့် DX9 ကို run ။ သူတို့ကဖော်ပြချက်ထဲတွင်ဖွစျလိမျ့မညျလျှင်တချို့က DX10 သဟဇာတဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီမှာ DX10 preview ကိုပြင်ပေးဖို့မရရှိနိုင်မယ့် payware ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင် program ကိုဝယ်ယူရန်မဟုတ်လျှင်တစ်ခုကို run ဖို့ သာ. ကောင်း၏ FSX DX9 ပေါ်မှာ။ အဆိုပါ DX10 preview ကို option ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်သည်မဟုတ်, ထိုသို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ effects ။ Windows ကို7များအတွက်တည်ငြိမ်သောပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် FSX နှင့်ငါပျံသန်းခြင်း simulation အသုံးပြုရာဖြစ်တယ်။ အခုဆိုရင်သင်တစ်ဖြောင့် version ကိုအပြေးနေကြသည်ဟုဆိုသည် FSX။ ငါသည်ဤညာဘက်နားလည်ခဲ့လျှင်သင်ပထမဦးဆုံးဖြန့်ချိ box ကို edition မှာတစ်ဦး, သို့မဟုတ် Deluxe ဗားရှင်းကိုဆိုလိုသည်။ သောအမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင် SP1 နှင့် SP2 load ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ် Acceleration ဆက်ပြောသည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကြောင်းခြင်းမရှိဘဲ, သစ်ကိုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ payware အများစု texture ကိစ္စများရှိပါလိမ့်မယ်။ ငါ့မှာရှိတယ် FSX ယင်းအရှိန် disk ကိုနှင့်တကွကြွလာတော်မူသောရွှေကိုထုတ်ဝေ။ အများစုမှာဖွယ်ရှိသင် program ကိုတင်ဆောင်လာသောအခါသင် DX10 ကို Preview box ကို check လုပ်ထားဘဲနေလျှင်, ပြဿနာကြောင့်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည် FSX လိုအပျသောဝန်ဆောင်မှုထုပ်နှင့်အတူယနေ့အထိထတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့ကိုသိပါစေ ... ကျေးဇူးတင်ပါသည်
1 months ago 11 တစ်နှစ် #971 by robtho
Fantastic !! သင့်ရဲ့အလွန်ကြင်နာအကြံဉာဏ်နှင့်လမ်းညွှန်မှုအဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သငျသညျအကြံပြုအဖြစ် SP 1 & SP2 ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယခုဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ တခါနောက်တဖန်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
1 months ago 11 တစ်နှစ် #972 by DRCW
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: robtho
1 months ago 11 တစ်နှစ် #974 by robtho
0.311 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်